ऋचाका २ प्रेम, जुन हल्ला थियो कि साँचो ? « Mazzako Online
ऋचाका २ प्रेम, जुन हल्ला थियो कि साँचो ?
अभिनेत्री ऋचा शर्मा बिहिबार बेलुकी निर्देशक निश्चल बस्नेतको बिहे भोजमा पुगिन् । ऋचाले निश्चल र उनकी बेहुली स्वस्तिमा खड्कालाई वधाई दिइन् । अभिनेत्री शर्माले खुशी हुँदै बिहेमा सहभागीता जनाएको तस्बिर कैद भयो ।
तर, के साच्चै ऋचा बिहे भोजमा सहभागी हुँदा खुशी थिइन् होला त ? कारण ऋचा र निश्चलको प्रेमले नेपाली फिल्म बजारमा चर्चा नपाएको होइन । ऋचा र निश्चल एक अर्कालाई प्रेम गर्थे भन्ने चर्चा त भयो, तर यसको पुष्टी भएन । ऋचा निश्चललाई केयर गर्थिन्, निश्चल पनि गर्थे । निश्चलको दुबै फिल्ममा ऋचालाई विशेष भूमिका दिइएको पनि छ ।
ऋचाको नाम अर्का अभिनेता गौरव पहारीसँग पनि जोडियो । विशेषगरि विदेशमा अवार्ड आयोजना हुँदा ऋचा र गौरव क्लोज देखिए । तर, यी दुइले चर्चालाई चर्चा मात्र भने । अवार्डमा पुग्दा गौरव र ऋचा नछुटेको अवार्डमा पुग्नेहरु बताउँछन् । तर, नेपाल आएपछि यी दुइको प्रेम चर्चा सेलायो । अहिले पनि ऋचा र गौरवको प्रेम थियो या थिएन भन्ने बिषयमा अस्पष्टता छ । ऋचाका यी दुई प्रेम खुल्न सकेनन् ।